ခွေးခြင်္သေ့.... ~ ဒီမိုဝေယံ
အယ်လ်ဇေးရှင်း၊ အင်းခွေး ဗမာခွေး၊
မာန်ဗလာ မာန်မရှိလို့ …
“သတ္တိ” “သစ္စာ” ဘယ်အရာမှစံမဝင်
၂. အောက်တိုဘာလ. ၂၀၁၀